अन्य संस्कृतिहरूसँग सञ्चार गर्दै – Vocre
अन्य संस्कृतिहरूसँग सञ्चार गर्दै
धेरै संस्कृतिहरूमा संवाद धेरै कारणका लागि मुश्किल हुन सक्छ. जब तपाईं त्यस्तो भाषामा बोल्नुहुन्छ जुन तपाईंको पहिलो भाषा होइन, तपाईं मिस कम्युनिकेसन र सांस्कृतिक अवरोधहरूमा दौडिन सक्ने बढी सम्भावना हुन्छ. भाग्यवश, there areafew ways you can curb some of this uncomfortable confusion.
अन्य संस्कृतिहरूसँग सञ्चारको लागि सुझावहरू
कुनै कुराकानी छैन तपाईसँग कुन सांस्कृतिक समूहसँग कुराकानी गर्ने योजना छ, संभावनाहरू यो हुन् कि तपाईंको अनुभव तपाईंको आफ्नै संस्कृतिबाट कसैसँग कुराकानी गर्न फरक हुनेछ. यी सुझावहरूले कान्भो सुरु हुनेछ.
1. अन्य संस्कृतिहरूको बारेमा जान्नुहोस्
अन्य संस्कृतिहरूसँग सञ्चार गर्नको लागि पहिलो चरणमा वास्तवमै थोरै रीक गर्नु हो. कसैको सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अनुसन्धानले देखाउँदछ कि तपाईं तिनीहरूमा रूचि राख्नुहुन्छ - र यो विश्वभरिका धेरै संस्कृतिहरूको आँखामा अत्यन्त नम्र मानिन्छ।!
खानाहरू मा एक सानो अनुसन्धान गर्नुहोस्, भन्सार, र आधारभूत वाक्यांशहरू. स्पेनिश सिक्दै? केही भाँडामा लिनुहोस् नेटफ्लिक्समा स्पेनिश भाषाका फिल्महरू! यदि तपाईं आफ्नो मातृभाषामा बोल्ने योजना बनाउनुहुन्छ भने पनि, तपाईं अर्को व्यक्तिमा रकस्टार जस्तो देखिनुहुनेछ. यसले सांस्कृतिक विविधताको लागि तपाईंको आदर रहेको पनि देखाउँदछ.
2. अन्य भाषाहरूमा साझा वाक्यांशहरू याद राख्नुहोस्
सबै भन्दा राम्रो मध्ये एक नयाँ भाषा सिक्नका लागि सल्लाहहरू सबैभन्दा पहिले सामान्य वाक्यांशहरू सिक्नु हो.
अर्को भाषामा सामान्य वाक्यांशहरू सिक्नु सजिलो छ(ish) अरूलाई देखाउनको लागि तरिका जुन तपाईं उनीहरूसँग आधा बाटोमा भेट्न इच्छुक हुनुहुन्छ. धेरै संस्कृतिहरूमा, मातृभाषा बुझ्ने प्रयास गर्नु शिष्ट मानिन्छ (यसको केही शब्दहरू पनि). यसले तपाईको खुट्टा ढोकामा अर्को व्यक्तिको साथ लिन मद्दत गर्न सक्छ.
सामान्य शब्दहरू र वाक्यांशहरू जसमा तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ समावेश गर्दछ:
अन्य भाषाहरूमा नमस्कार
के तपाईंलाई बाथरूम चाहिन्छ??
मलाई माफ गरिदेउ
के यो अर्थ राख्छ??
यी धेरै साधारण वाक्यांशहरू बुझ्नु संस्कृतिहरू बीचको अन्तर कम गर्न र अरूलाई दबाउको केही लिन मद्दत गर्दछ. भाग्यवश, सिक्न को लागी धेरै स्रोतहरु छन् साझा चिनियाँ वाक्यांश, सामान्य फ्रेन्च वाक्यांशहरू, and common phrases in other languages.
3. अनुवाद अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्
अनुवाद अनुप्रयोगहरू विगतका केही वर्षहरूमा एक्लै लामो यात्रामा आएका छन्. (अझै, केहि नि: शुल्क अनुप्रयोगहरू, जस्तै गुगल अनुवाद्, सही रूपमा छैनन् धेरै भुक्तान अनुप्रयोगहरू।)
आजभोलि, तपाईं शब्द अनुवाद गर्न सक्नुहुन्छ, वाक्यांशहरु, र पूरै वाक्य पनि. यी अनुप्रयोगहरू नयाँ शब्दहरू र वाक्यांशहरू सिक्न मद्दतको लागि एक उत्तम तरिका हो.
कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईले कुनै भाषामा कुराकानी गरिरहनु भएको छ - वा तपाईमा अस्वाभाविक हुनुहुन्न, तपाईको मातृभाषामा कुराकानी गरिरहनु भएको छ एक गैर प्रवाहित स्पिकरको साथ. तपाई ठीक हुनुहुन्छ. ठीक छ जबसम्म तपाईं स्पेनिशमा कसरी 'कपडा ह्या say्गर' भन्न सकिन्छ भनेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्न, र तपाइँको मिमि skills सीपले चाल गर्दै छैन.
अनुवाद अनुप्रयोगको प्रयोगले तपाईंलाई अवरोध पार गर्न मद्दत गर्दछ जुन अन्यथा क्रस भन्दा ठुलो हुन सक्छ. Vocre अनुप्रयोगले शब्दहरू अनुवाद गर्न सक्दछ, वाक्य, र वास्तविक समयमा वाक्यांशहरू! यसलाई प्राप्त गर्नुहोस् एप्पल स्टोर वा गुगल प्ले.
अन्तिम मिनेट यात्रामा जाँदै? जाँच गर्नुहोस् अन्तिम मिनेट यात्रा को लागी सबै भन्दा राम्रो यात्रा अनुप्रयोगहरू!
4. आधारभूत भाषा प्रयोग गर्नुहोस्
हाम्रो आफ्नै संस्कृति भित्र, हामी बोल्ने तरिका बोल्ने तरिकाको ब्यबस्थामा छौं. जब तपाईं संयुक्त राज्यको विभिन्न क्षेत्रहरूमा यात्रा गर्नुहुन्छ।, you’ll findawide variety of slang and jargon.
मिडवेस्टमा, स्थानीयहरूले पपको डिब्बाको लागि सोध्छन् (सोडा को सट्टा); पूर्वी तटमा, त्यहाँ बस्ने बासिन्दाहरूले केहि भन्न सक्दछन् "खराब" राम्रोको सट्टा 'साँच्चिकै' राम्रो. पश्चिम तटमा, स्थानीयहरूले प्राय: "टेनिस जुत्ता" भन्ने वाक्यांश कुनै पनि प्रकारको स्नीकर्सको अर्थ प्रयोग गर्दछन्.
धेरै विद्यार्थीहरूले स्लng्ग र बोलचाल सिक्छन् मात्र तिनीहरूले सबैभन्दा साधारण वाक्यांश र शब्दहरू सिके पछि. Try to think about the types of words you learned first when learninganew language.
यो अनुमान गर्न सजिलो छ कि कसैले बुझ्दैन वा भाषा अवरोधको कारणले तपाईंलाई 'प्राप्त' गर्दैन. But we so very rarely get the opportunity to be good listeners and good communicators.
सक्रिय श्रोता बन्ने प्रयास गर्नुहोस्. अर्को व्यक्तिले के भनिरहेछ केवल शोषण नगर्नुहोस्; सक्रिय रूपमा सुन्न प्रयास गर्नुहोस् र निर्धारण गर्नुहोस् कि यदि तपाईं अर्को व्यक्तिलाई बुझ्दै हुनुहुन्छ भने. दुबै मौखिक र गैरवाचक संकेतहरूमा ध्यान दिनुहोस्. गैरवेरल संकेतहरू प्रयोग गर्नुहोस् (जस्तै nods वा टिल्ट) बुझाइ वा भ्रम व्यक्त गर्न.
धेरै अंग्रेजी बोल्ने देशका मानिसहरु छिटो बोल्ने बानी छन्, but this type of speech pattern can create even more language barriers.
बिस्तारै बोल्नुहोस् (तर यति बिस्तारै होइन कि तपाईंको श्रोताले कुरा गरेको महसुस हुन्छ) र तपाइँको शब्दहरु ennavates.
कसैलाई थाहा छैन यो सजीलो हो जसको उच्चारण तपाई भन्दा धेरै फरक छ. संयुक्त राज्य अमेरिका. एक्लैसँग सयौं स्थानीय उच्चारणहरू छन्!
कल्पना गर्नुहोस् यदि तपाईं जापानबाट हुनुहुन्छ र बेलायती शिक्षकबाट अ speak्ग्रेजी बोल्न सिक्नुभयो भने. Listening toaperson withaheavy Maine accent might not even sound like English to you.
7. स्पष्टीकरण फीडबैक प्रोत्साहित गर्नुहोस्
कहिलेकाँहि हामी सोच्छौं कि कसैले हाम्रो शब्दहरू बुझ्दछन् - जब त्यो त्यस्तो हुँदैन. उही अर्थमा, it’s easy for others to assume they understand us and miss our message altogether.
तपाईंको श्रोतालाई प्रतिक्रिया प्रदान गर्न प्रोत्साहित गर्नुहोस् र स्पष्टीकरणको लागि सोध्नुहोस्. धेरै संस्कृतिहरूले रूखको रूपमा प्रश्नहरू सोध्छन्, and some cultures will wait until you stop speaking to ask for clarification.
भ्रमबाट बच्न अक्सर प्रतिक्रियाको लागि सोध्नुहोस्.
8. जटिल वाक्य संरचना प्रयोग नगर्नुहोस्
हामी मध्ये धेरै जसो हामी आफ्ना साथीहरूसँग बोल्ने बानीमा आएका छौं, परिवार, र सहकर्मीहरू - अन्य संस्कृतिका व्यक्तिहरू होइनन्. हामी प्राय: ठूला शब्दहरू प्रयोग गर्दछौं र जटिल वाक्य संरचना (यद्यपि यी जटिल संरचनाहरू हामीलाई यति जटिल लाग्न सक्दैन!)
यदि तपाईं आफ्नो मातृभाषामा बोल्दै हुनुहुन्छ भने, कुराकानीमा तपाईंको पार्टनरको स्वर नाप्नुहोस्, र जटिलताको त्यो व्यक्तिको भाषा स्तर मिलाउन प्रयास गर्नुहोस्. यो बाटो, तपाईं अरूलाई अन्धकारमा छोड्नुहुन्न, and you won’t offend other people by ‘talking down’ to them.
9. हो वा कुनै प्रश्नहरू नसोध्नुहोस्
क्रस-सांस्कृतिक सञ्चारमा सबैभन्दा ठूलो गल्ती मध्ये धेरै धेरै सोध्नु हो हो वा केहि प्रश्नहरू छैनन्. केही संस्कृतिहरूले यसलाई नराम्रो भाषा प्रयोग गर्नका लागि खराब बेहोरा ठान्छन्, such as the word ‘no’.
विश्वका केही क्षेत्रहरूमा, जस्तै मेक्सिको सिटी, तपाईले फेला पार्नुहुनेछ कि स्थानीयहरू पूर्ण रूपमा “होईन” भन्दैनन्. बरु होईन भनेर, धेरै स्थानीय मानिसहरूले केवल आफ्नो टाउको हिलाइन्, हाँसो, and say thank you instead.
हो वा कुनै प्रश्नहरू लाई बेवास्ता गर्नु सजिलो छैन, तर यो रणनीति सामान्य मा एक महान संचार उपकरण हो. कसैलाई सोध्नुको सट्टामा उनीहरूसँग केहि प्रश्नहरू छन्, भन्नु, “के तपाईले मैले छुटेको केहि हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ??"
10. शारीरिक भाषा नोट गर्नुहोस् - तर यसको आधारमा न्यायाधीश नहुनुहोस्
यो अनुमान गर्न सजिलो छ कि कसैले तपाईंलाई बुझ्दछ. धेरै संस्कृतिहरूमा, हामी विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको हात उठाउन र शिक्षक अवरोध गर्न प्रयोग गरिरहेका छौं. अझै, धेरै संस्कृतिहरू अवरोध हुनेछैन, त्यसकारण शरीरको भाषा याद गर्नु र त्यस अनुसार सन्देश समायोजन गर्न स्पिकरको भर पर्दछ.
सूचना अनुहारको भाव र अन्य गैरकानूनी संचार संकेत. यदि एक श्रोता अलमल्ल देखिन्छ, तपाईंको कथनलाई पुनःप्रशोधित गर्ने प्रयास गर्नुहोस्. यदि तपाइँको श्रोता एक टिप्पणी मा अनुपयुक्त देखिन्छ हाँस्न, त्यसमाथि मात्र चमक नलगाउनुहोस्. तपाईंले वाक्य संरचना वा शब्द प्रयोग गर्नुभएको हुन सक्दछ जुन अर्को संस्कृतिबाट कसैलाई पूर्ण रूपमा फरक छ.
भनिएको भइरहेको छ, नसोच कि प्रतिक्रिया केवल नकारात्मक वा सकारात्मक शरीर भाषामा आधारित छ, शरीर भाषा फरक संस्कृति भित्र फरक सन्देश हुन सक्छ.
11. तपाईंको मातृभाषामा कसैलाई कहिल्यै 'कुराकानी नगर्नुहोस्'
ओभरएक्सप्लेन गर्न चाहानु सजिलो छ. Overexplaining अक्सर एक राम्रो स्थान बाट आउँछ, but it can have negative effects.
अर्को व्यक्तिको आराम स्तर र भाषाको अनुभव नाप्ने प्रयास गर्नुहोस्. यदि तपाईं आफ्नो मातृभाषामा बोल्दै हुनुहुन्छ भने, स्पष्ट सन्तुलन प्रहार, concise speech.
Overexplaining कहिलेकाँही कसैलाई बोलेको रूपमा आउन सक्छ - विशेष गरी जब त्यो व्यक्ति तपाईंको भाषाको मूल वक्ता होइन।. You might want to gauge the other person’s comprehension level before assuming he or she won’t understand you.
अन्य संस्कृतिका धेरै मानिसहरू अक्सर बोल्दछन् (विशेष गरी जब अ speaking्ग्रेजी बोल्छन्) किनभने मूल वक्ताले सजिलै माने कि ऊ वा उनी बुझ्दैनन्.
12. आफूलाई र अरूप्रति दयालु हुनुहोस्
तपाईले धैर्य धारण गर्नु महत्वपूर्ण छ जब तपाई कसैलाई भाषा बोल्दै हुनुहुन्छ जुन तपाईको पहिलो भाषा होइन (वा जब तपाईं कसैसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ जो आफ्नो पहिलो भाषा बोल्दैन!).
जब यो कुनै पनि प्रकारको संचार गर्न आउँछ (पार सांस्कृतिक संचार कि हैन), don’t rush.
सांस्कृतिक मतभेद सधैं यो अधिक प्रबल देखिन्छ. बोल्न हतार नगर्नुहोस्, जवाफ दिन हतार नगर्नुहोस्, and don’t rush to judge.